Maurizio Sarri ayaa sheegay inuu xiiseynayo mashruuca Chelsea | Gooldhalin
Maurizio Sarri ayaa sheegay inuu xiiseynayo mashruuca Chelsea
Go’aanka waxaa laga yaabaa in horey loo sameeyo dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda
Tababaraha Napoli ayaa ah mid ka mid ah dhowr macalin oo bedel u noqon kara Antonio Conte xagaagaan. Wali wuxuu doonayaa inuu qandaraas cusub u saxiixo Napoli, lakiin waxa uu qaadanayaa muddo dheer, dhab ahaantii waa hubaa inuu joogi doono Naples.
Sida laga soo xigtay wargeyska Gazzetta dello Sport, Sarri ayaa haatan “aad u xiiso badan” waxa Chelsea ay u soo bandhigi karta qandaraas uu ku imaddo Bluse, lakiin waxa la fahamsan yahay inuu waqti qaadanayo.
Napoli ayaa 4 dhibcood ka danbeysa Juventus oo ku jirta oo ku jirta kallinta kowadd ee Serie A, waxaana uu waji waji uu wajihii doona 22ka April. Ciyaarta ayaa laga yaabaa inay go’aansato mustaqbalka Sarri, waxaana warbixinta soo jeedineysa inuu kaliya sii joogi doono hadii Napoli ay badiso kulankaas .